Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Aqalka Sare ee Galmudug iyo wafdi tegay - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Aqalka Sare ee Galmudug iyo wafdi tegay
Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Aqalka Sare ee Galmudug iyo wafdi tegay
Wafdi ka socda guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug, kuwaas oo dadaallo ku aadan doorashada ka bilaabaya gudaha magaaladaasi.
Wafdigan ayaa waxaa horkacayo guddoomiye ku xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Maxamed Ibraahim Barre, waxaana marka ay tageen Dhuusamareeb garoonka Ugaas Nuur ku soo dhoweeyey mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug.
Ujeedka wafdigan safarka ku tegay Dhuusamareeb ayaa ah ka qeyb-galka doorashada Aqalka Sare ee dhowaan ka dhaceysa gudaha magaaladaasi.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka oo gaaraya illaa 7 xubnood ay kulamo ka bilaabi doonaan caasimada Galmudug, iyaga oo marka hore wada-tashiyo la yeelan doono guddiga doorashada iyo mas’uuliyiinta sar sare ee maamulkaasi.
Guddigan loo saaray xalinta khilaafaadka doorashooyinka ka dhacaya dalka ayaa howshiisu waxa ay tahay la socodka doorashada iyo xalinta muranada ka imaan kara kuraasta qaar.
Galmudug ayaa haatan wada diyaar garowgii ugu dmabeeyey ee doorashada Aqalka Sare, waxaana la filayaa in Qoor Qoor uu shaaciyo liiska xubnaha u sharraxan Golahaasi.
Jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreeya ee bilaaba doorashada dalka, waxaana ku xigay Koonfur Galbeed, kadib markii Senataro cusub lagu doortay Kismaayo iyo Baydhabo.
Doorashada Soomaaliya ayaa marxalada kala duwan iyo khilaafaadyo kala heerar ah soo martay, hayeeshee ugu dambeyn waxaa heshiis looga gaaray magaalada Muqdisho.